के नेपाली जनता दास नै भएका हुन् त ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
के नेपाली जनता दास नै भएका हुन् त ?
२०७१ पुष ३, बिहीबार ०३:३२ गते
जनता गन्ने गणकहरुको टोलीले नेपालमा पुगनपुग २ करोड ६५ लाख जनता रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । यो संख्यामा पैसामा नागरिकता बेचेको संख्या पनि जोडिएको
होला । ज्यानमात्रै गनेर त्यति पु¥याए पनि होलान् । तर, ज्यानमात्रैलाई मान्छे भनिँदैन । शरीर र मान्छेमा फरक छ । त्यसैगरी, नागरिक हुन तोकिएको उमेर पार गर्नुपर्छ भने नागरिकहरुको समूहलाई जनता भनिन्छ र त्यसको पनि खास चरित्र हुन्छ । त्यो चरित्र नभए नागरिकहरुको समूहलाई पनि जनता भनिँदैन । जनताको परिचय पाउनको लागि नागरिकहरुको समूहले सबैभन्दा पहिले आफ्नो कर्तव्य बुझेको हुनुपर्छ र दोश्रोमा आफ्नो अधिकारबारे सचेत हुनुपर्छ । कर्तव्य बिर्सेर अधिकारमात्रै माग्नेलाई पनि जनता भनिँदैन । त्यस्तालाई अवसरवादी नागरिक समूह भनिन्छ । सम्पूर्ण रुपले जनता हुन एक पाटाको कर्तव्य र अर्को पाटाको अधिकारलाई एकसाथ बुझेको र पालना गरेको हुनुपर्छ । त्यो अवस्थामा मात्रै नागरिकहरुको समूहले “जनता”को परिचय र प्रमाणपत्र पाउन सक्छन् । अब पहिले चर्चा कर्तव्य पालनको ।
नेपाली जनताले सक्षम सावित राजनीतिक दललाई बहुमत दिएर सरकारमा पु¥याउनुपथ्र्यो, तर पटकपटक अक्षम वा असफल सावित राजनीतिक दललाई नै जनताले भोट दिएर बहुमत दिँदा वा ठूलो पार्टी बनाउँदा मुलुक जहाँको त्यहीँ रह्यो, अघि बढ्न सकेन । अमेरिका र बेलायत त्यसै विकसित भएका
होइनन् । प्रमाणले भन्छ– “अमेरिकी र ब्रिटिसहरुले बोलेको बचन पूरा नगर्ने राजनीतिक दललाई अर्को निर्वाचनमा भोट दिँदैनन् ।” ती देशमा धेरै दलहरु पनि छैनन् । राष्ट्र अघि बढाउन धेरै राजनीतिक दल चाहिँदा पनि चाहिँदैन । कुनै दुई वा तीन दलमध्ये कुनै एक दललाई भोट दिँदा उसले देशहितमा काम गरे पुनः त्यही दललाई अर्कोपटक भोट दिन्छन् । र, गर्न नसके अर्को दललाई जिताएर सरकारको जिम्मा लगाउँछन् । नपत्याए आजसम्मको अमेरिकी र बेलायती राजनीतिक इतिहास इन्टरनेट प्रयोगमार्फत अध्ययन गर्दा हुन्छ । यो कोणबाट हेर्दा प्रमाणका साथ भन्न सकिन्छ, “अमेरिकाका र बेलायतका जनताले जनताको विशेषताअनुरुप आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।” तर, घोर विडम्बना ! नेपालमा नागरिकहरुको समूह जनताको रुपमा प्रस्तुत हुन सकेनन् । राजनीतिक दलहरुका “अनन्तकालीन दास”का रुपमा प्रस्तुत भए । जनता जनताका रुपमा नरही दासका रुपमा प्रस्तुत भएको उदाहरण यस्तो छ ।
यतिबेला संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल सभासद् संख्याका आधारमा नेपाली कांग्रेस सावित भएको छ । उसले पचहत्तरै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको छ । क्रियाशील सदस्यता दिएर बाँचुन्जेल नेपाली कांग्रेस पार्टीको चुनाव चिन्हमै भोट हाल्न पर्ने बाध्यता खडा गरेको छ । क्रियाशील सदस्यको प्रभावमा पर्ने, पारिने अरु सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि जिन्दगीभरिको लागि कांग्रेस बनाइएको छ । “बाँचुन्जेल कांग्रेस पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने, मरेपछि त्यही पार्टीको चारतारे झन्डामा बेरिएर घाट जाने ।” नेकपा एमालेले पनि संगठित सदस्यका नाममा त्यही तरिका अपनाएको छ । एमाओवादी र अन्य दलले पनि त्यही सिको गरेका छन् । अर्थात् तलदेखि माथिसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म जनतालाई दायाँबायाँ सोच्न पनि नदिने अवस्थामा राखेर अनन्त कालसम्म भोट लिइरहने, शासनमा गइरहने र जनतालाई दुःखको खाडलमा जाकिरहने प्रपञ्च रचिएको छ । यो परिपाटी नेपालबाहेक संसारका अन्य कुनै मुलुकमा देख्न पाइँदैन । पार्टी छन्, नेता छन्, कार्यकर्ता छन् तर सबै जनतालाई आदेशपालक दासका रुपमा राखिएको छैन । नेपालमात्रै त्यस्तो देश हो, जुन देशका जनतालाई जनताका रुपमा रहन दिइएन । जनतालाई कुनै न कुनै दलको दासका रुपमा राखियो । यही कारण हो, नेपालमा नयाँ र सक्षम राजनेता र दलको जन्म हुन सकेन । नयाँ दल जन्मिए पनि फस्टाउने वातावरण बन्न सकेन र जनताले आफ्नो विशेषता र परिचय नै भुल्दै गए । यदि जनताले जनताकै रुपमा कर्तव्य पालन गरेका भए एउटा राजनीतिक दलले मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याहरु समाधान गर्न नसकेको प्रमाण पाउनेबित्तिकै अर्को निर्वाचनमा अर्को दललाई बहुमत दिएर सरकारको जिम्मा लगाउँथे ।
विक्रम सम्वत् २०४६ सालपछि लगातार नेपाली कांग्रेस नामको पार्टीले सरकार चलायो । तर, मुलुकबाट अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारको अन्त्य भएन । एमाले पनि पटकपटक सरकारमा गयो, समस्याहरु जस्ताको तस्तै रहे । प्रचण्डवाला ग्रुप जँुगामा ताउ लगाएर सरकारमा उक्लियो । समस्या समाधानमा बीसको उन्नाइस भएन । देखियो, मौजुदा राजनीतिक दलले देशलाई अघि बढाउँदैनन् तर फेरि भन्नैपर्छ कुनै न कुनै दलको दासत्व स्वीकारेकाहरुले अरु दललाई भोट दिएर सरकारको जिम्मा लाउँदैनन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई बहुमत दिन किन नहुने ? त्यस पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा राख्न किन नहुने ? वा, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बहुमत दिन किन नहुने ? त्यस पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जिम्मा लाउन किन नहुने ? तर, सम्भव छैन । किन सम्भव छैन भने यो देशमा जनतालाई जनताका रुपमा रहन दिइएको छैन । केही दलको सिन्डिकेट चलेको छ र आलोपालो सरकारमा जाने र तोकिएका नेताहरु नै पटकपटक, धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुने तर अरुलाई बाटो छेक्ने, ढोकै बन्द गरिदिने । यो तरिकाले जनताले आफ्नो कर्तव्य ठम्याउन नसकेर जिन्दगीभरि एउटै माखो मार्न नसक्ने राजनीतिक दललाई भोट दिँदा दलविशेषलाई जनताको चित्त दुखाए पनि केही फरक नपर्ने “स्थायी प्रमाणपत्र” प्राप्त भएको छ । कुरा भोट दिने विषयसँग मात्रै सरोकार राख्दैन । बोलेर कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने बखतमा समेत जनताले मुख खोलेनन् ।
केही दिनअघिमात्रै बेलायती राजदूतले नेपालको राजधानी काठमाडौँमा नेपालको अब बन्ने “नयाँ संविधानमा धर्म परिवर्तन गर्न पाउनु पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ” भने । उनको भनाइले नेपाली राष्ट्रियतामाथि ठाडो हमला गरेको थियो । तुरून्तै नेपाली जनताले “खबरदार, मिस्टर गोरे ! धर्म परिवर्तनबारे बोलेर हामी नेपाली–नेपालीबीच लडाइँ लडाउने खेल नखेल, गरिब नेपालीलाई पैसाको प्रलोभन देखाएर हाम्रो मुलुकमा चर्चको संख्या बढाउने र नेपाली मौलिक पहिचान मेटाउने दुस्साहस नगर, बेलायती राजदूत मुर्दावाद, हाम्रो देश र जनताको अहितमा बोल्ने राजदूतलाई नैतिक कारबाही गर” भन्नुपथ्र्यो । यो तरिकाले नेपाली जनताले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपथ्र्यो, तर त्यो कर्तव्य पूरा भएन । किन पूरा भएन भने जनतालाई जनताका रुपमा रहन आजसम्म दिइएकै छैन । दासहरुको घाँटीभित्र आवाज भएर पनि बाहिर निस्किँदैन, यो सबैलाई थाहा छ । यदि नेपाली जनतालाई आजसम्म जनताकै रुपमा रहन दिइएको थियो भने नेपालको कुनाकाप्चामा कतै सिमाना मिचिएको खबर प्राप्त हुनेबित्तिकै विरोधका स्वरहरु सुनिने थिए । एक किलो आलुको मूल्य साठी रूपैयाँ पु¥याउँदा ए ! यतिविघ्न अत्याचार किन गर्छौ भन्ने तरिकाले संगठित आवाज उठ्थ्यो । जनताको मुख सदासदाका लागि सिलाएर राखिएपछि चाहे यो व्यवस्था होस् चाहे त्यो व्यवस्था, जुनसुकै व्यवस्थामा पनि कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कहिल्यै आवाज उठेन । दासत्व थोपरिएकै कारणले जनताको मुख टालिएको टालियै ग¥यो । मुख टालिएकै कारण कर्तव्य त जनताले ठम्याउँदै ठम्याएन, अधिकारसमेत के हो पत्तै पाएन ।
देशभरिका बाटाहरु भत्किएर लथालिंग अवस्थामा छ । सवारीसाधन दुर्घटनाका थुप्रै कारणमध्ये यो एउटा प्रमुख कारण बनेको छ । नभत्किएको सडक प्रयोग गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो । तर, यो अधिकार जनताले कहिल्यै माग्न सकेनन् । टाढा जान पर्दैन– भारतसँग सिमाना जोडिएको, नेपालबाट धेरै नजिकको दूरीमा रहेको श्रीलंकाका जनताले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाएका छन् । अमेरिका र बेलायतलगायत अन्य विकसित मुलुकको कुरा बेग्लै भयो । श्रीलंकाली जनताको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क पाउने अधिकार हो भने नेपाली जनताको पनि अधिकार हो । तर, मुख भएर कहिल्यै बोल्ने आँट नगरेका नेपाली जनता यो अधिकार माग्न कहिल्यै अघि सरेन । उल्टै, दिन प्रतिदिन जनतालाई दास बनाउने दलका सरकारहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई महँगो बनाउँदै छ, सर्वसाधारण जनताको पहुँचबाट टाढा धकेल्दै छ । तैपनि, जनता आफ्नो अधिकार खोज्दैन र भन्दैन कि हाम्रो अधिकार हामीलाई देऊ, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर । जनताले आफ्नो अधिकार नबुझेको अवस्थाबारे सयौँसयौँ उदाहरण दिन सकिन्छ । त्यति संख्यामा उदाहरण जरूरी छैन । यतिबेलै जनताले आफ्नो अधिकारबारे थाहा नपाएको ताजा उदाहरण नै काफी हुन्छ ।
विश्व तेल बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छ महिनामा आधा घट्यो । तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरुको संगठन ओपेकले छ महिनाअघि प्रतिब्यारेल ११५ डलरमा बिक्री गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ६० डलरमा झा¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ हुँदा नेपालमा पनि घटबढ हुनुपर्ने सामान्य नियम छ । तर, मूल्यमा आएको गिरावटबाट संसारका पेट्रोलियम उपभोक्ताले फाइदा लिँदै राहत पाइसके तर नेपाल सरकारले तेलको आधा मूल्य नै घटाउनु पर्नेमा सुका, मोहरमात्रै घटाएर नेपाली जनता दासै हुन्, यिनीहरु विरोधमा बोल्दैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह ग¥यो । त्यस कारण, उपलब्ध यी सबै प्रमाणहरुले बेजोडका साथ भनिरहेका छन्– नेपाली जनताले आजसम्म आफ्नो कर्तव्य ठम्याउन सकेनन्, साथमा आफ्नो अधिकारबारे पनि जानकार भएनन् । यो अवस्था आइलाग्नुमा जनतालाई सधैँभरि “मुट्ठीभित्रको झिँगा” बनाइराख्नेहरु हुन् भन्दा पाप लाग्दैन । आज २ करोड ६५ लाख जनता भएर पनि यो दयनीय अवस्था देख्दा प्रश्न सोध्न सकिन्छ– यो देशमा जनता छन् कि छैनन् ?